5-bromo-2- (trifluoromethyl) pyrimidine (799557-86-1) - APICMO Pyrimidines
Products > 5-bromo-2-(trifluoromethyl)pyrimidine (799557-86-1)
Kukwanisa kubereka, kugadzira uye kugadzira zvakawanda zve5-bromo-2- (trifluoromethyl) pyrimidine (799557-86-1) nehutano hwehutsika pasi peCGMP
5-bromo-2-(trifluoromethyl)pyrimidine (799557-86-1) video
799557-86-1 Product Specifications
Nyaya yekubikira (˚C) 139.8
Canonical SMILES C1 = C (C = NC (= N1) C (F) (F) F) Br
CAS no. 799557-86-1
Kemikari zita 5-Bromo-2- (trifluoromethyl) pyrimidine
Kuwanda kwevanhu (g / cm3) 1.808
Empirical formula C5H2BrF3N2
Flash point (˚C) 38.35
Muviri wehumu (g / mol) 226.98
IUPAC zita 5-Bromo-2- (trifluoromethyl) pyrimidine
Nhamba yakanyunguduka (° C) 41 - 42
Monoisotopic mass (g / mol) 225.935
Physical State simba
Synonyms · Bromotrifluoromethylpyrimidine
· Pyrimidine, 5-Bromo-2- (trifluoromethyl) -
· 2- (trifluoromethyl) -5-bromopyrimidine
1 Kudzokorora nokuti 5-bromo-2-(trifluoromethyl)pyrimidine (799557-86-1)
Tinobudisa zvakawanda zve5-Bromo-2- (trifluoromethyl) pyrimidine (799557-86-1) pane kambani ye APICMO. Kungofanana nezvimwe zvese zvezvigadzirwa zvedu, tinova nechokwadi chekutevera Maitiro Akanaka Okugadzirwa Kwezvinhu kana kuti cGMP quality controlprinciples.5-Bromo-2- (trifluoromethyl) pyrimidine inonyanya kutsvakurudza, chimiro synthesis, uye kubudirira.
Nzira yakarongeka ye 5-Bromo-2- (trifluoromethyl) pyrimidine (799557-86-1)
Nezve 5-Bromo-2- (trifluoromethyl) pyrimidine
Iyo kuenzanisa kuenzaniswa kwezvivako zveXXUMUM-Bromo-5- (trifluoromethyl) pyridine inoshandiswa kuburikidza neFourier Transform Infrared (FT-IR) uye nhamba dzezvinhu zveNuclear Magnetic Resonance (NMR). Kubva ipapo, takashandisa Density Functional Theory (DFT) kuti tive nekugadzirisa mashizha emagetsi e-2-Bromo-5- (trifluoromethyl) pyridine kushandisa CAM-B2LYP, B3PW3, uye B91LYPfunctional method.Kuverenga maikirwo emagetsi uye maitiro ekudengenyeka, isu takashandisa zvakare nhatu Density Functional nzira pamwe chete ne3-6 ++ G (d, p) yakaiswa.
Takagadzirisa zvinhu zvisina kukwana (NLO) zveZ5-Bromo-2- (trifluoromethyl) pyridine nemagetsi akafanana. HUMO-LUMO masikirini emagetsi emagetsi uye kushamwaridzana kwavo kwakanyatsojekeswa neDFT nzira yakatarwa nenguva uye Integral Equation Formalism-Polarized Continuum Model, yakafukidzirwa seIEF-PCM.Wakawana yekuita kwechipiri kugadzirisa kwekubatana kwemasero kubva kuNBO (Natural Bond orbital) kuongorora.
Pakupedzisira, tinoshandisa nzira ye agarose gel electrophoresis kuti tione zvinogadziriswa nemamolekoro pa pBR322 plasmid DNA. Kuti uongorore mabasa e-antimicrobial, unoda kushandisa Minimal Inhibitory Concentration Method.
Zvishandiso zve5-Bromo-2- (trifluoromethyl) pyrimidine (799557-86-1)
Iro mishonga inopindira inoshandiswa mukutsvakurudza, kubudirira, uye kujekesa maitiro emamwe makondombera.
Properties uye Chikemikari Zviwanikwa zve5-Bromo-2- (trifluoromethyl) pyrimidine (799557-86-1)
Hydrogen bond Mubatsiri wekuverenga - hapana
Acceptor count - 5
Free rotatable bond hapana
5-Bromo-2- (trifluoromethyl) pyrimidine (799557-86-1) ipilitiki yakachena yekristini.
5-Bromo-2- (trifluoromethyl) pyrimidine Computed Properties
Topological polar surface area 25.78 A ^ 2
Surface mhirizhonga (dyne / cm) 34.02
Misa chaiye (g / mol) 225.935
Enthalpy ye vaporization (kJ / mol) 36.149
Synthesis Route ya 5-Bromo-2- (trifluoromethyl) pyrimidine (799557-86-1)
5-Bromo-2- (trifluoromethyl) pyrimidine (799557-86-1) Pasi uye Precursor Products
5-Bromo-2- (trifluoromethyl) pyrimidine (799557-86-1) GHS Dambudziko rekushandisa
5-Bromo-2- (trifluoromethyl) pyrimidine (799557-86-1) inogumbura. Kana ikasangana neziso, ganda, kana kupemha, inokuvadza uye inogona kukuvadza uye zviratidzo zvinotevera. Apo matanho ekutanga emubatsiro anowanikwa panguva, pane zvishoma zvisingasviki.
5-Bromo-2- (trifluoromethyl) pyrimidine Meso Okudzivirira
Kutarisira 5-Bromo-2- (trifluoromethyl) pyrimidine
Shandisa 5-Bromo-2- (trifluoromethyl) pyrimidine (799557-86-1) chete kana uine ruzivo rwakawanda runoshanda nemakemikari anokuvadza. Taura nezvekuchengeteka kwedheta uye mapikisi emavara asati aedza. Kana zvisina kudaro, shanda pasi pekutarisa kwakasimba kwevashandi vanogona.
Nokuda kwechiso chenyu, maziso e-puton ekuchengetedzwa kwemaziso, chiso chakakwana-mask, nemhepo inoputika ine mafikisi epo akakwana. Respirator inodzivisa vashandi kubva kufema mune zvingave zvinopesana nemafuta, guruva, kana vaporo. Ivhara maoko nemaekemikisi asingagadziki magasi. Pamusoro pemumwe muviri wose, shandisa sutu yakazara uye bhoti rehobho.
Tanga-tanga mapepa akawanda emhando yekuchengetedza mu laboratori, iyo inogona kungorega kubatana zvakananga ne5-Bromo-2- (trifluoromethyl) pyrimidine asiwo kukurumidzira matanho ekutanga anobatsira. Zvimwe zvezvinhu izvi zvinokosha zvinosanganisira kushambidza, kuchengetedzwa kwemhepo, mafoni ekuchenesa mweya, kupedza simba rekudzivirira, kupedza mharizhonga, uye fodhi yemoto.
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyrimidine (799557-86-1) Storage
Chengetedza 5-Bromo-2- (trifluoromethyl) pyrimidine pane imwe nzvimbo yechando nekugara. Usafambisa kubva pakuchengetwa kwepakutanga. Ivhare yakachengeteka mumudziyo usina kutenderera uye nzvimbo munzvimbo yakaoma, inotonhorera, uye inoputika.
Kuteerera kuhutano hwehutsanana hwakadai sekugeza maoko uye kushambidza nguo dzakasvibiswa. Bvisa bhenji rekushanda nekuunganidza nekurasira makemikari zvakasara. Zvishandiso zvisina kushandiswa zvinofanira kudzorerwa kumapuranga. Kana yakasvibiswa, sarura sezvinongoita mamwe matsi. Zvichida, geza uye gadzirisa bhenchi.
Endesa munhu kune imwe nzvimbo ine mahara akawanda. Kana uchiri kungwarira usina kunyora chero upi zvake hunofuridza hunofuridzira, bvumira munhu wacho kuti agare panzvimbo yakanaka yekufema.
Kusanzwisisa nezviratidzo zvekutsvaira, kusvibiswa kwemhepo, uye zviratidzo zvakanyorwa zvinoda kuti iwe uwedzere hurumende yekubwinya kwepfungwa. Muhutano hwakaoma, unogona kupa mhepo ye oxygen usati watsvaga rubatsiro rwemhirizhonga kubva kunechiremba.
Kunze kwekuti zvipfeko zvakanamatira paganda, bvisai vasati vashamba nzvimbo yakakanganiswa nemvura yakawanda yemvura uye isiri isina kubvisa. Ita izvi zvishoma nehana 15 maminitsi apo uchitarisa pamusoro pezvinogona kuvhiringidza, kuvhiringidzika, kubwinya, kuora mwoyo, kana zvimwe zvinokonzera kugadzirisa. Tora nzvimbo yacho neyemhepo.
Kana ari maziso, kunyatsochenjerera kushambidza maziso paunenge uchitarisira zvakanyanya maziso. Chengetedza maziso paunoramba uchitsvaira kwe10 inotevera kumaminitsi e15.
Chenjerera kuti usakonzera kurutsa apo 5-Bromo-2- (trifluoromethyl) pyrimidine (799557-86-1) yakanganisa kana kuti ichimedza nemaune. Uyezve, usaedza kuisa mishonga kune mumwe munhu asingazivi.
Geza muromo uye unwe zvisati zviduku zvinokwana 2 dzemvura kana mukaka. Kana zviratidzo zvisingadzorwiki, enda kune imwe nzvimbo yehupfu kana kuonana nachiremba ane kopi yeS SDS (Safety Data Sheet).
Isa pazvibvumirano zvinogamuchirwa zvine mweya unopfutidza uye udzimise mazhenje nemafuta akaoma, polymer mutezo, kana CO2Tora matanho akachengeteka kubva ku5-Bromo-2- (trifluoromethyl) pyrimidine inokonzera utsi hwehutu hunopisa kana huchidzimwa.
Stability & Reactivity ya5-Bromo-2- (trifluoromethyl) pyrimidine (799557-86-1)
5-Bromo-2- (trifluoromethyl) pyrimidine inomira yakasimba kunze kwekunge yakasvibiswa nemhepo inopisa, kupisa, maruva, kana moto. Ichengetedze kure nemasikiriti uye yakasimba acids kana zvigaro. Pasi pemamiriro ezvinhu aya, chigadzirwa chinodonha muzvinhu zvinokuvadza, izvo zvinonzi nitrogen oxides, hydrogen bromide, hydrogen fluoride, uye oxidhi yekakoni.
Nenguva Dzakasunungurwa Maitiro
Bvisai kusvibiswa uye muunganidze zvakasimba mucherechedzo salvage mudziyo wakagadzirirwa kurasa.Kutarisana nemhando yepanyama yekupararira, svetuka pasina kuunza kugadzirwa kweguruva kana kusanganiswa ne inert inogadzirisa uye inotora iyo chinhu.
5-Bromo-2- (trifluoromethyl) pyrimidine haafaniri kupinda mumvura mvura kana migwagwa. Chimwe chinhu chakakosha chekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza ndeyekuti chigadzirwa hachifaniri kusunungurwa kune zvakatipoteredza.
5-Bromo-2- (trifluoromethyl) pyrimidine Kurasikirwa Kwemarara
Dzinga wa5-Bromo-2- (trifluoromethyl) pyrimidine (799557-86-1) sechinhu chakasvibiswa. Shandisa michina yekambani yemunharaunda, iyo yave iine mvumo yekugadzirisa zvinodhaka zvinotyisa.
Kana iwe uchikwanise kuwana ikemikari incinerator, savharebhenekeri5-Bromo-2- (trifluoromethyl) pyrimidineby kuisanganisa ne-solvent inopisa.
5-Bromo-2- (trifluoromethyl) pyrimidine (799557-86-1) Mashoko ekutumira
5-Bromo-2- (trifluoromethyl) pyrimidine yakachengeteka nokuda kwekufambisa kwemazuva ose kuburikidza nepasi, mhepo, kana kutengeswa kwemvura.
Information Regulatory Information
Ingoshandisa 5-Bromo-2- (trifluoromethyl) pyrimidine ichienderana nemitemo inobvumirana nayo. Chigadzirwa chacho chinogadzirirwa kutsvakurudza kwega uye kwete nokuda kwekuongororwa kana kushandiswa kwerapa.
Pa APICMO, kufarira kwedu ndekutsvakurudza kwesayenzi, kutsvaga kwesayenzi yemishonga inopesana nekenza, chemikemikari, zvinyorwa uye masayenzi ehupenyu, chromatography, uye nyanzvi yemakemikari. Taura nesu kana iwe uchida rubatsiro neminda inotaurwa.
5-Bromo-2- (trifluoromethyl) pyrimidine (799557-86-1) Kurayira Kukuru uye Mutengo
Isu tinoshanda mune zvose zviviri uye zviduku zve 5-Bromo-2- (trifluoromethyl) pyrimidine kune vatengi vedu vanokosha. Kana iwe uri kutsvaga chigadzirwa muzhinji, rejista kambani nesu uye tarisa mutengo. Kana ukasapinda mauri, iwe uchaona chete quotation seurongwa mutengo. Taura nevatengi vedu kuchengetedza kurongeka.
National Centre For Biotechnology Information, US. National Library of Medicine, Pubchem, 5-Bromo-2- (trifluoromethyl) pyrimidine, Zvikamu 1-9.
John Wiley & Vanakomana, 13 Jul 2015, Organic Syntheses: Collective, Volume 11, peji 750-756.
Mike Desing, Chemical Sources International, Incorporated, 1998, Chem Sources - USA, peji 1400-1440.
Eric FV Scriven, Academic Press, Pyridines: Kubva Kubhidhi Kubva Mukugadzirwa, 8 Jan 2013, peji 56-57.